Bahamas waxay soo dhoweynaysaa safarrada cusub ee Crystal Cruises laga bilaabo dayrta
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Bahamas News Breaking » Bahamas waxay soo dhoweynaysaa safarrada cusub ee Crystal Cruises laga bilaabo dayrta
Wasaaradda Dalxiiska & Duulista Hawada ee Bahamas waxay ku faraxsan tahay inay ku darto 3 socdaal oo cusub oo Crystal Cruises ah oo ku saabsan safaradeeda sii kordhaya ee socdaalka laga bilaabo dayrtaan iyo xilliga jiilaalka ugu sarreeya. Crystal Cruises ayaa ku dhawaaqday taxaneheeda cusub ee shiraacyada ah ee saarnaa Crystal Symphony, iyadoo xilliga qaboobaha uu soo dhow yahay.
Bilaabidda safarrada dheer ee xilli-ciyaareedka badan waxay noqon doontaa safar 7-habeen ah oo si habboon loogu magacaabay Bound for Paradise.
Safarku wuxuu ka bilaaban doonaa Magaalada New York isagoo ku sii jeeda Nassau 6 -da Noofambar, 2021, oo leh dekado laga soo waco San Salvador, Great Exuma, iyo Bimini.
Marka xigta Sannadka Cusub wuxuu noqon doonaa dabbaaldeg kuleyl ah oo ka bilaaban doona 2021 magaalada New York kuna dhammaanaya 2022 -ka Bahamas.
"Waxaan ku faraxsanahay dalabka joogtada ah ee socdaalka Bahamas waxaana rajeyneynaa inaan soo dhoweyno dadka safarka ah dayrta," ayuu yiri Hon. Dionisio D'Aguilar, Wasiirka Dalxiiska & Duulista Hawada ee Bahamas. "Crystal Cruises waxay cadeysay inay tahay iskaashi miro dhal ah oo kaliya maahan warshadaha dalxiiska ee Bahamas, laakiin sidoo kale warshadaha dalxiiska maxalliga ah maadaama ay u oggolaanayso rakaabku inay ka soo degaan markabka ayna sahamiyaan ganacsiga, hawl wadeennada dalxiiska iyo waxqabadyada dhammaan Jasiiradaha Qoyskayaga."
Bahamas The wuxuu bilaabi doonaa isku-darka dheeriga ah ee xilli-dhowrka ah, marka hore socdaal 7-habeen ah, Bound for Paradise, wuxuu bilaaban doonaa Noofambar 26, 2021, laga bilaabo New York City ilaa Nassau, isagoo u yeeraya San Salvador, Great Exuma iyo Bimini.
Cruisers-ku waxay bilaabi karaan Sannadka Cusub si sax ah Bahamas markay tahay Diseembar 29, 2021, iyada oo loo sii marayo socdaalka Dabaaldegga Sannadka Cusub ee Tropical, oo ay ku jiraan safar 10 habeen ah oo ka socda Miami, Florida ilaa Bimini, San Salvador, Long Island iyo Great Exuma, oo leh joojinta kama dambaysta ah ee aan la leenahay walaalaha Carriibiyaanka ah ee jaarka ah ee Jamaica.
Socdaalka raaxada leh ee Bahamian ee Barakeysan wuxuu yeelan doonaa dhowr socdaal oo ka bilaabanaya Janaayo 22, 2022, oo ka imanaya Miami, oo ay ku jiraan joogsiyada Bimini, Nassau, San Salvador, Great Exuma iyo Long Island. Taxanaha ayaa lahaan doona laba shiraac oo dheeri ah Febraayo 12, 2022, iyo Maarso 5, 2022.
Crystal Cruises waxay beddeshay sida socdaaladu ugu safraan Bahamas, taas oo u oggolaanaysa rakaabku sahamin yaababka Jasiiradaha Qoyska ka baxsan biyaha quruxda badan, oo ay ku jiraan duur -joogta, astaamaha taariikheed, Goobaha Dhaxalka Adduunka ee UNESCO, dukaamaysiga iyo cuntada.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan bilawga soo socda ee Crystal Symphony, fadlan booqo www.crystalcruises.com
Iyada oo leh in ka badan 700 jasiiradood iyo qiyaamo iyo 16 meelood oo jasiirad u gaar ah, Bahamas waxay ku taal meel 50 mayl u jirta xeebta Florida, iyada oo bixisa duulimaad fudud oo ka baxsanaya safrayaasha maalin kasta. Jasiiradaha Bahamas waxay leeyihiin kalluumeysi heer caalami ah, quusitaan, doonid iyo kumanaan mayl oo ah biyaha iyo xeebaha ugu quruxda badan dhulka. Bahamas waxaa lagu yaqaanaa inay leedahay qaar ka mid ah biyaha ugu cad adduunka. Aad bay u caddahay in cirbixiyeenka NASA Scott Kelly uu la wadaagay daraasiin sawirro ah oo jasiirado ah, intii uu dhulka ku meeraysanayey 2015. Wuxuu bartiisa Twitter -ka ku qoray in Bahamas ay tahay “meesha ugu quruxda badan meel bannaan.” Baadh dhammaan jasiiradaha waa inay ku bixiyaan www.bahamas.com ama Facebook, YouTube or Instagram si aad u aragto sababta ay uga Fiican tahay Bahamas-ka.